मनोरञ्जन Archives - Nagarik Today
by nagariktoday २०७७ असार १८ गते , बिहीबार
काठमाडौं – नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानले नेपाल इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल (निफ्फ)को चौंथो संस्करण २०२१ यही फेब्रुअरी २४ देखि २८(फागुन १२ देखि १५) सम्म काठमाडौंमा हुने भएको छ । यस फेस्टिभलमा सहभागिता जनाउन चाहने इच्छुक फिल्मकर्मीहरुले यही २०२० जुलाई १ देखि नोभेम्बर २० सम्म सहभागिताकालागि आवेदन दिन सक्छन् । “विश्वका कथाहरुको कथ्य उत्सव” भन्ने नाराका साथ “फिल्म संस्कृति” को विकास गर्ने उद्देश्यसहित सुरु भएको फेस्टिभलमा यो वर्ष महामारीको विषयमा बनेका फिल्मलाई समावेश गरिर्न निर्णय गरिएको छ ।
कोभिड १९ले पारेको प्रभावमा बनेका यस्ता फिल्मले ५०० अमेरिकी डलर तथा ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत सर्वोत्कृष्ट फिचर फिल्मलाई १५०० अमेरिकी डलर राशिसहित गौतमबुद्ध अवार्ड प्रदान गरिनेछ भने इन्टरनेशनल फिडेरेसन अफ उिल्म सोसाइटिजका जुरी तर्फबाट IFFS Don Quijote Award पनि प्रदान गरिने छ । यसैगरी, सर्वोत्कृष्ट वृत्तचित्रलाई १००० डलर राशिको माउन्ट एभरेष्ट अवार्ड, सर्वोत्कृष्ट एनिमेटेड चलचित्रलाई ५०० डलरको मञ्जुश्री अवार्ड प्रदान गरिनेछ भने सर्वोत्कृष्ट लघु चलचित्रलाई ५०० डलर राशिको बाग्मती अवार्ड प्रदान यथावत रुपमा गरिनेछ ।
त्यसैगरी नेपाली प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत उत्कृष्ट फिचर फिल्मलाई रू. १ लाख, उत्कृष्ट सर्ट फिल्मलाई नगद रू. ५० हजार र सर्ट मध्यबाट उत्कृष्ट फिल्म निर्देशकलाई ट्रफी प्रदान गरिने छ भने फिचर फिल्म तर्फका उत्कृष्ट निर्देशक, लेखक, छायांकार, अभिनेता र अभिनेत्रीलाई पनि ट्रफी प्रदान गरिनेछ ।
यस पटक फेस्टिभलमा सहभागिताका लागि फिल्मकर्मीहरुले FilmFreeWay मार्फत फिल्म पठाउनुपर्नेछ ।
अन्तराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत सर्ट र डकुमेन्ट्री फिल्मले १५ अमेरीकी डलर र फिचर फिल्मले २० डलर आवेदन शुल्क तोकिएको छ । यसैगरी, महामारीको विषयमा बनेका फिल्मले मात्र १० डलर तिरेर सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । नेपाली प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत आवेदन दिन भने कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।
२०७७ असार १८ गते , बिहीबार0comment
२०७७ बैशाख २९ गते , सोमबार0comment
रणवीर र आलियाको विवाह कश्मीरमा
by nagariktoday २०७६ मंसिर २५ गते , बुधबार
मुम्बई – बलिउड कलाकार रणवीर कपुर र आलिया भट्ट अहिले प्रेममा छन्। डेटिङ पनि गरिरहेका छन् तर उनीहरूले आफ्नो सम्बन्धलाई सर्वजनिक रूपमा स्वीकार भने गरेका छैनन्।
दुवैका अभिभावक पनि उनीहरूको विवाहका लागि सहमत भइसकेका छन्। उनीहरू दुवैको छिट्टै विवाह भएको हेर्न चाहन्छन्। ऋषि कपुरले त बारम्बार अप्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूलाई विवाह गर्न आग्रह नै गरिरहेका छन्। आलियाका पिता महेश भट्ट पनि उनीहरूको विवाहका लागि सहमत भइसकेका छन्।
आलिया र रणवीरका नजिकका साथीभाइका अनुसार उनीहरू पनि अब विवाहका लागि तयार भएका छन्।सूत्रका अनुसार आलियाले विवाहको योजना पनि बनाइसकेकी छन्।उनीहरूले भारतमै विवाह गर्ने छन्।
कश्मीर आलियाको मन पर्ने स्थान हो।मेघना गुलजारको फिल्म ‘राजी’को सुटिङका लागि उनी २०१७ मा कश्मीर गएकी थिइन्। सुटिङका क्रममा कश्मीरको सुन्दरताले आलियाको मन चोरेको हो। त्यसैले उनी कश्मीरमा विवाह गर्न चाहन्छिन्। आलियाको यो फैसलामा रणवीर पनि राजी भएका छन्। एजेन्सी
२०७६ मंसिर २५ गते , बुधबार0comment
विवादमा ‘दबंग ३’
मुम्बई – बलिउड अभिनेता सलमान खानको फिल्म ‘दबंग ३’ विवादमा परेको छ। फिल्मको रिलिजअघि सनातन हिन्दुवादी संस्थाले बहिष्कारको घोषणा गरेको छ।
अभिनेता खानले फिल्मको नामसँगै साधु र महात्माको चरित्र चित्रण गलत शैलीले गरेको कारण हिन्दुवादी संस्थाहरुले एकजुट भएर फिल्म बहिष्कार गर्ने भएका हुन्। हिन्दू जनजागृति समिति र बजरंग दलका अनुसार यस फिल्ममा साधुसन्तलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ। उनीहरुले संयुक्त रुपमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै फिल्मको विरोधमा उत्रिएका थिए। ‘दबंग ३’ फिल्मको सुटिङको क्रममा यसलाई लिएर आन्दोलन भएको थियो। फिल्मको एउटा गीतमा साधुलाई गिटार बोकाइएको छ।
‘अभिनेता सलमान खानले मुस्लिम धर्मका गुरुमाथि व्यंग्य गरेका छैनन्। उनले निर्माण गरेको फिल्ममा साधुलाई व्यंग्यात्मक रुपमा प्रस्तुत गरिन्छ। उनले हिन्दु धर्मलाई हेर्ने नियत गलत भएकाले हामी उनको नयाँ फिल्म दबंग ३ बहिष्कार गर्छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। ‘दबंग ३’ मा अभिनेता खानसहित सोनाक्षी सिन्हा र किचा सुदीप लगायतले अभिनय गरेका छन्।एजेन्सी